Mavara Hook Magnets vagadziri uye vanotengesa | Horizon
Iwo mavara ehungwe magineti, Neodymium mavara magineti zvikorekedzo kana musanganiswa ruvara hoko magineti anoshandiswa kuturika, kusiyanisa uye kuziva zvinhu zviri nyore.
Iwo mavara eredhiyo magineti anoratidzwa mukuonekwa kwemavara shanduko mune yakajairwa Neodymium haka magineti. Iyi shanduko yakajeka yekutaridzika inowedzera kuwedzera kwayo kushanda. Chirauro chinogona kukamurwa nyore kupinda mukati kana kunze kweyekutenderera base magineti. Ichi chimiro chakareruka chinogona kugonesa vashandisi kuti vachinje mhando yehuku kune zvido zvavo. Iyo kapu yesimbi kubva kuNeodymium yakajeka magineti zvikorekedzo inoisa simba remagineti uye ichinongedzera kunzvimbo yekubatana kuitira kuti saizi diki yemagineti ibudise simba rakasimba rekubata. Vanopa hukuru hwakakura hwekubata zvinhu zvakasiyana senge tambo, waya, tambo kana zvipfeko munzvimbo zhinji, senge matura, mahofisi, makirasi, nzvimbo dzekushandira, kicheni, nezvimwe.
Nei Uchisarudza Makara Makore Hook
1. Assorted mavara anowanikwa: chena, nhema, girini, bhuruu, tsvuku, pepuru uye goridhe. Unogona kusarudza ako aunofarira mavara, kana kutiudza isu ndeapi mavara manyowani aungade. Uye ipapo ivo vanogona kurongedzwa mumiseti yeyako inodiwa color musanganiswa.
2 .Easy kushandisa: Iyo Neodymium magineti uye simbi hari dhizaini inogadzira ine simba rekukwezva simba uye ipapo diki uye compact saizi yehuku magineti inogona kusangana neyako inodiwa yekubata kugona. Inotakurika nyore uye inobvisika, uye iwe unogona kushandisa zvikorekedzo pese panenge paine simbi kana simbi yekurembera kwemukati kana kwekunze.
3.Kutaridzika kwakakwana: Kuonekwa kwehokwe uye kutenderera magineti base kwakatsetseka uye kupenya.
4. Masikisi akaenzana aripo uye anowanikwa kuti ugoendeswa pakarepo
Unyanzvi Dhata reColored Hook Magnets
Chikamu Nhamba D M H h Simba Net Kurema Kunonyanyisa Uchishandisa Tembiricha
Pashure: Pot Magnet ine Yemukati Thread
Zvadaro: Hook Magnet neZiso Bolt
Pot Magnet pamwe neni ...
Pot Magnet neB ...